प्रदेश ५ का तीन जिल्लामा एक हजार बढी संक्रमित | Mechikali Daily
प्रदेश ५ का तीन जिल्लामा एक हजार बढी संक्रमित
Posted By: रमेश पराजुलीon: १७ भाद्र २०७७, बुधबार २०:२७
बुटवल, भदौ १७ । प्रदेश पाँचका तीन जिल्लामा संक्रमित एक हजार नाघेका छन् । रुपन्देहीमा १ हजार ९३, कपिलवस्तुमा १ हजार १ सय ३७ र बाँकेमा १ हजार ६४ पुगेका हुन् । यीमध्ये रुपन्देहीमा ६६० र बाँकेमा ३३४ सक्रिय संक्रमित छन् । जसलाई खतराको रुपमा लिइएको छ । यी जिल्लामा संक्रमितको संख्या दिनहुँ वृद्धि भइरहँदा कोरोना नियन्त्रणमा थप चुनौती देखिएको छ । प्रदेशमा मृत्यु हुनेको संख्या पनि ३२ पुगेको छ ।
कोभिड–१९ को संक्रमण पछिल्लो समय समुदायस्तरमै तीव्र रूपमा फैलिएको छ । बुधबार मात्रै प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा १४ महिला र ३१ पुरुष गरी थप ४५ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । योसँगै प्रदेशमा कुल संक्रमितको संख्या ६ हजार ६१५ पुगेको प्रदेश ५ सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. पुष्पराज पौडेलले बताए । जसमा एक हजार एक सय चार महिला र पाँच हजार पाँच सय ११ जना पुरुष रहेका छन् । यो संख्या नेपालका कुल संक्रमितमध्ये १६ प्रतिशत हो ।
थपिएका संक्रमितहरुमा कपिलवस्तुका ११ जना, पाल्पाका १ जना, बाँकेका ९ जना, गुल्मीका १० जना, अर्घाखाँचीका १ जना, रुपन्देहीका ९ जना, नवलपरासी पश्चिमका २ जना र बर्दियाका २ जना रहेका छन् । प्रदेशमा बुधबार थप ४६ जना संक्रमणमुक्त भई घर फर्किएका छन् । योसँगै हालसम्म कुल संक्रमितमध्ये पाँच हजार ६२ जना निको भएका छन् ।
यस्तै प्रदेश पाँचमा कोरोना संक्रमणबाट हालसम्म ३२ जनाको मृत्यु भएको छ । यो कुल संक्रमितको शून्य दशमलब ४७ प्रतिशत हो । अहिले प्रदेशमा ४ वटा आइसोलेसन अस्पतालमा संक्रमितहरुलाई राखेर उपचार भइरहेको छ । पीसीआर परिक्षण गर्न स्वाब संकलन गरिएकामध्ये ९७ प्रतिशतको रिपोर्ट आइसकेको छ जसमा ७ प्रतिशतको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले मेलापर्व मनाउँदा विशेष ख्याल गर्न आग्रह गरेको छ । चाडपर्व मनाउने नाममा धेरैजना जम्मा हुँदा कोरोना फैलिनसक्ने जोखिम बढी हुने भएकाले आफ्ना परिवार मात्र बसेर सामाजिक दूरी कायम गरी चाडपर्व मनाउन डा. पौडेलले आग्रह गरेका छन् । साथै अनावश्यक रुपमा बाहिर ननिस्किन र निस्किनै पर्ने अवस्थामा विशेष सावधानी अपनाउन उनले आग्रह गरेका छन् ।
प्रदेशका कुल संक्रमितमध्ये एक हजार चार सय ७३ जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् । तीमध्ये १० देखि १५ प्रतिशतमा कोरोनाका लक्षण देखिएका छन् । प्रदेश सरकारद्वारा संचालित कोरोना विशेष अस्पतालमा लक्षणसहितका र गम्भीर बिरामी ११३ जनाको उपचार भइरहेको डा. पौडेलले जानकारी दिए । जसअनुसार लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालद्वारा संचालित कोरोना विशेष अस्पताल धागो कारखानामा २० जनाको सामान्य कक्षमा, १५ जनाको आइसीयू र ३ जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ । यस्तै, भीम अस्पताल भैरहवामा २१ जनाको सामान्य र ४ जनाको आइसीयूमा उपाचार भइरहेको छ ।
केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, बेलझुण्डी दाङमा ३२ जना संक्रमितको सामान्य कक्षमा र १ जनाको आइसीयूमा उपचार हुँदैछ । सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल बाँकेमा ४० जना सामान्य उपचार कक्षमा उपचाररत छन् । प्रदेश सरकारले संचालन गरेका विभिन्न ठाउँका १३७ वटा आइसोलेसन सेन्टरमा लक्षणविहीन १ हजार २६३ जना संक्रमितलाई राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै हालसम्म प्रदेशका एक सय सत्र जना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
रूपन्देहीमा तीनजना संक्रमितको मृत्यु
रूपन्देहीमा तीन जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । मंगलबार राति भैरहवाको भीम अस्पतालमा उपचाररत नवलपरासीका महिला र बुटवलको कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचार गराइरहेकी कपिलवस्तु महिलाको बुधबार बिहान कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको हो । दुवै जटिल संक्रमण देखिएपछि आइसियूमा उपचाररत थिए । त्यस्तै बुधबार दिउसो बुटवलका पुरुषको पनि भीम अस्पतालमा मृत्यु भएको हो । कृष्णनगर नगरपालिका वाड नम्बर ११ रामनगरकी ७० वर्षीया सोनमति कुर्मीको बुधबार बिहान सवा ९ बजे कोरोना विशेष अस्पताल बुटवलमा मृत्यु भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कपिलवस्तुका कोरोना फोकल पर्सन कुमार थापाले बताए ।
उनी लामो समयदेखि उच्च रक्तचापको बिरामी थिइन् । संक्रमित महिलामा उच्च रक्तचापलगायत दीर्घ रोग रहेको र संक्रमणपछि ज्वरो आउनुका साथै श्वासप्रश्वासमा समेत समस्या देखिएको थियो उपचारकै क्रममा भदौ ७ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । यससँगै कपिलवस्तु्ुमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुगेको छ । मृत्यु हुनेमा ३ पुरुष र एक महिला रहेका छन् । कपिलवस्तु नगरपालिकामा २ जना, मायादेवी गाउँपालिकामा १ जना र कृष्णनगर नगरपालिकामा एक जना महिलाको मृत्यु भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कपिलवस्तुले जनाएको छ ।
नवलपरासी रामग्राम नगरपालिका–५ परासीकी ६५ वर्षीया महिलाको मंगलबार राति मृत्यु भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी डा.नारायण पोख्रेलले जानकारी दिए । कोरोना संक्रमित महिला भदौ १५ गते अस्पतालमा भर्ना भएकी थिइन् । उनको मंगलबार राति ९ः४५ बजे उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको हो । सुगर–प्रेसरसंगै श्वासप्रश्वासमा समस्या भएकाले उनलाई आइसियूमा राखेर उपचार गरिएको थियो । भीम अस्पतालमा यसअघि गैडहवा गाउँपालिका–३ का ५० वर्षीय कोरोना संक्रमित पुरुषको मृत्यु भएको थियो भने तिलोत्तमा नगरपालिकामा होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितलाई उपचारका लागि भिम अस्पतालमा ल्याउँदै गर्दा बाटामै मृत्यु भएको थियो ।
भिम अस्पतालमा ४ आइसियू र अन्य बाँकी गरी २१ जना संक्रमित बिरामी उपचारार्थ रहेका छन् । त्यस्तै भैरहवास्थित भीम अस्पतालमै बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नंं ६ कोरोना संक्रमित ५७ वर्षीय पुरुषको बुधबार मृत्यु भएको हो । अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. नारायण पोखरेलले दिउँसो आइसियुमा उपचारको ती पुरुषको मृत्यु भएको जानकारी दिए । ‘कोरोना संक्रमित उहाँको एक्कासी हृदयघात भएर मृत्यु भयो’ पोखरेलले भने । उनलाई बुटवलको कोरोना बिशेष अस्पतालबाट भदौं १५ गते भैरहवाको भीम अस्पताल पु¥याइएको थियो ।